Kiraro: ballerine, kapa, baoty - Tsarabika
> Vehivavy>Kiraro: ballerine, kapa, baoty
Misy entana 41 isa.
Kiraro "ballerine moustache" natao ho an'ny vehivavy. Tsara ny endriny, misy sary volombava. Maivana, sy tsy mandreraka tongotra, na dia mandeha alavitra aza. Mety amin'ny fiakanjo rehetra ihany koa.
Kiraro ho an'ny vehivavy, misy "talon" izy ity ary ny endriny dia tena hafa noho ny hafa mihitsy. Ny lokony fotsiny dia hafa noho ny hafa mihitsy. Tena natao hoan'ny vehivavy tia loko, ary mety amin'ny karazana akanjo rehetra ihany koa. P 37
Raha tia loko dia ity ny "sandales multicolore" izay tena ankafizin'ny ankamaroan'ny vehivavy amin'izao fotoana zao. Misy "talon" izy ity ary miloko marevaka, tena fitondra amin'izao toetr'andro izao.
Kiraro "derbie noir" maivana, ary mora hoentina. Mety amin'ny fotoana rehetra ihany koa ary tsy mandreraka na dia hoentina tontolon'ny andro aza. P 35 ka hatramin'ny 39
Kiraro ho an'ny vehivavy tena tsara, ary mihaja ihany koa. Misy haingo toy ny "nœud" kely eo amboniny. Tena mora hoentina ary tsy mankarary tongotra ihany koa. P 36
Kapakapa amin'ny endriny tena hafa mihitsy, natao ho an'ny vehivavy tia mampiady loko, na ihany koa tia karana-doko. Tena raitra ary mety, tsy mamizana, malefadefaka koa ny faladiany, ka tsy mora tapaka, ary mety amin'ny karazana akanjo rehetra. Habehany 36
Ity kapakapa ity dia mety raha hoentina mandeha an-tongotra lavitra, na ihany koa hoentina miasa. Tsotsotra nefa tena tsara ny bikany. Mafy tsrara ihany koa izy tsy mora simba na tapaka, ary mampahazo aina izay manao azy.
Kiraro maivana fitondra mande miasa, na mandeha an-tongotra. Maivana, tsy mandreraka ranjo, ary mampahazo aina tsara ity kiraro ity. Misy loko maro izy ireto "noir, marron, blanc cassé. Ary misy ny habeny mifanaraka amin'ny tongotrao ihany koa.
Kiraro mihaja miloko mainty natao ho an'ny vehivavy. Kiraro mihaja, ary fitondra indrindra rehefa mandeha fanasana na fety. P 37
escarpin blanc cassé
"Escarpin" kiraro mihaja ho an'ny vehivavy, azo hotenina mamonjy fety, na lanonana. Tsy manahirana ny manao azy indrindra ho an'ireo izay efa zatra manao kiraro avo. Mihaja tsara, ary afaka ho entina mandihy ihany koa. P 36,37